Champions League-ga Oo Lagu Sameenayo Isbadal Cusub Oo Kordhinaya Tirada Kooxaha Premier League-ga
HomeWararka CiyaarahaChampions League-ga oo lagu sameenayo isbadal Cusub oo kordhinaya tirada Kooxaha Premier league-ga
May 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka Ingiriiska 0
Horyaalka Premier League ayaa shan kooxood ku yeelan doona sannad kasta tartanka Champions League, kaddib markii maanta la shaaciyey qorsheyaal isbeddel loogu samaynayo tartanka naadiiyada Yurub.
Kaddib laba sannadood oo ay dood qadaadh taagnayd, kooxaha, maamullada horyaallada iyo xidhiidhka kubadda cagta Yurub ayaa ugu dambayntii isla qaatay in isbeddel lagu sameeyo tartanka Champions League oo qaab cusub loo dhigo.
Isbeddellada ayaa bilaabmi doona xilli ciyaareedka 2024-25, waxaana la kordhinayaa tirada kooxaha ka qayb-gelaya oo laga dhigi doono 36 halkii ay hore uga ahaayeen 32, waana halka uu horyaalka Premier League ka arkay fursadda uu ku doonayo in koox shanaad uga qayb-gasho Champions League.
Qorsheyaasha isbeddelka ayaa waxa ku jira qodob dhigaya, in kooxaha afarta ah ee lagu soo kordhinayo loo isticmaalo heerka qiimaynta naadiyada ee UEFA oo laba kooxood sidaa loogu soo kordhiyo iyadoo la adeegsanayo xogtooda garoomada.
Waxay tani ka dhigan tahay, in labada waddan ee horyaalladoodu ugu fiican yihiin ay ka fursad fiicnaadaan kuwa kale. Tusaale ahaan, dhibcaha kooxaha waddan walba uga soo qayb-gelaya Champions League ayaa loo qaybin doonaa tirada naadiyada kasoo qayb-gelaya tartanka, waxaana labada kooxood heli doona labada dal ee hela dhibcaha ugu badan.
Qorshahan oo aan wali aad loo qeexin, waxa uu fursad siinayaa horyaallada waaweyn oo mar walba kooxahoodu qiimaynta UEFA kaga sarreeyaan kuwa dalalka kale, gaar ahaan Premier League oo ah horyaalka waqtigan ugu wanaagsan.
Shanta horyaal ee waaweyn ee Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga iyo League 1 ayay min afar kooxood uga soo qayb-galaan tartanka Champions League, sidoo kalena Erevisie ayaa qaata doorkiisa, halka horyaallada kale sida Ruushka ay min laba ama saddex helaan.